Amagqwetha e-DNC aphikisana ne-DNC Inelungelo lokukhetha abaviwa kumagumbi angasemva - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Amagqwetha e-DNC aphikisana ne-DNC Inelungelo lokukhetha abaviwa kumagumbi angasemva
Amagqwetha e-DNC aphikisana ne-DNC Inelungelo lokukhetha abaviwa kumagumbi angasemva
Ngomhla wama-28 ku-Epreli umbhalo wakhululwa kwelona tyala lakutshanje kwinkundla yomanyano eFort Lauderdale, eFla., Kwityala elifakwe egameni labalandeli bakaBernie Sanders ngokuchasene neKomiti yeLizwe yeDemokhrasi kunye nalowo wayesakuba ngusihlalo we-DNC uDebbie Wasserman Schultz ngokukhwabanisa unyulo lweDemokhrasi kuHillary UClinton . Ngalo lonke ixesha lokuxoxwa kwetyala, amagqwetha abamele I-DNC kunye noDebbie Wasserman Schultz baphinde baziphikisa iimpikiswano eziqinisekisa ukuba iDemokhrasi ayinantlonelo ngabaxhasi bakaBernie Sanders kunye nalo naliphi na iqumrhu elicela umngeni kubume beqela.
Kwakufutshane nokuchotshelwa kwetyala, amagqwetha e-DNC abanga iNqaku V, iCandelo le-4 le-DNC Charter-echaza ukuba usihlalo we-DNC kunye nabasebenzi kufuneka baqinisekise ukungathathi cala kukhetho lwe-Democratic Presidential-ngumthetho wokukhetha ongafunekiyo ukuba uqale ngawo. . Ngokusekwe koku kucingelwayo, I-DNC Amagqwetha athi inkundla ayinakho ukutolika, ukubanga, okanye ukwenza isigqibo ngayo nayiphi na into enxulumene nokuba i-DNC ihlala ingathathi cala kunyulo lwabo lobongameli.
Amagqwetha abamele i-DNC ngaphambili baphikise ukuba abaxhasi bakaSanders bayazi ukuba iiprimaries zibotshiwe, kungoko ke kususwa uxanduva olunokubakho kwi-DNC. Kwityala lamva nje, baphinda kabini kule ngxoxo: Inkundla kuya kufuneka ifumanise ukuba abantu baxhasa ngokuzimisela UBernie Sanders Kwaye ngubani owayengazi ukuba obu buhlanga buqhubeka ngebungazange bunikwe Mnu. Sanders, kuSenator Sanders, ukuba babesazi ukuba kukho le ntando.
UJared Beck, igqwetha elimele abaxhasi bakaSanders kwityala lesenzo seklasi, uphendule ngelithi i-DNC Charter ayihambelani nengxoxo yezopolitiko eziza kusetyenziswa ngusopolitiki ngexesha lephulo, kodwa eyona nto ibalulekileyo kunye nenxalenye ebalulekileyo yedemokhrasi eMelika. Ingxoxo iyonke ye-DNC kwelityala kukudibanisa izithembiso zomgqatswa wezopolitiko kunye nomgwebi wonyulo obotshelelwe kukungathathi cala yi-DNC Charter, kunye nokubanga ukuba ukunyanzelwa ngobuqhetseba akunakuze kungqinwe njenge I-DNC Amagqwetha atyhola, ndicinga ukuba kukho umboniso ongenakwenzeka wokubangela.
Abantu babhatala imali bexhomekeke ekuqondeni ukuba unyulo lokuqala lonyulo lweDemokhrasi-inkqubo yokutyumba ngo-2016 yayinobulungisa kwaye ingakhethi buso, utshilo u-Beck. Kwaye ayisiyiyo nje into esisiseko esinokuthi siyicinge ngenxa yokuba siphila kwidemokhrasi, kwaye sicinga ukuba unyulo lwethu luqhutywa ngendlela enobulungisa nengakhethi cala. Kodwa yiloo nto itshatha yeDemocratic National Committee uqobo lwayo. Ithi ngombala omnyama nomhlophe. Kwaye abanako ukuyiphika loo nto. Wongeze wathi, Ayisiyiyo kuphela lo mnqophiso, kodwa yathethwa kaninzi kumajelo eendaba ngabasebenzi beKomiti yeSizwe yeDemocratic, kubandakanya neCongress UWassermann Schultz , eneneni, babesenza ngokuvisisana nalo mthetho-siseko. Kwaye bayitsho kaninzi-ninzi, kwaye sikhankanyile iimeko ezininzi zetyala.
Emva kwexesha kuxoxwa, amagqwetha amele I-DNC ibango lokuba iKomiti yeSizwe yeDemokhrasi iya kuba ngaphakathi kwamalungelo abo okungena kumagumbi angasemva njengakuqala kwaye ukutshaya iisiga kunye nokukhetha umgqatswa ngaloo ndlela. Ngokutyhala ingxoxo kuyo yonke inkqubo yeli tyala lesenzo, iklasi IKomiti yeSizwe yeDemokhrasi uxelela abavoti kwinkundla yomthetho ukuba ababoni sinyanzelo kunyanzelekile ukuba baqhube unyulo oluphambili olungenamkhethe.
Amagqwetha e-DNC ade aya kuthetha ukuba amagama angenamkhethe kwaye enziwe ngesandla-asetyenzisiwe I-DNC Itshata-ayinakutolikwa yinkundla yomthetho. U-Beck uziphendulile, ndiyothuka ukuva ukuba asinako ukuyichaza ukuba kuthetha ntoni into yokuba sibanjwe ngesandla kwaye singakhethi. Ukuba bekunjalo, besingenakuba neenkundla. Ndiyathetha, yile nto eyenziwa ziinkundla yonke imihla, ithatha isigqibo ngeembambano ngendlela engafanelekanga nengakhethi cala.
Impikiswano evela kwiGqwetha le-DNC.Inkundla yeSithili sase-US
yinyanisofinder inc ngobuqhetseba
Ijaji emva koko yabuza amagqwetha e-DNC malunga nento eyenziwa yiKomiti yeSizwe yeDemokhrasi nokuba inoxanduva lantoni-kwaye amagqwetha e-DNC abenengxaki yokuphendula le mibuzo. Ndiyiipesenti ezingama-90 kuloo nto, uphendule I-DNC Amagqwetha ekuphenduleni umbuzo wokuba ingaba i-DNC ifumana inkxaso-mali kuRhulumente.
Ijaji iqukumbele ukuxoxwa kwayo ngokuchaza omabini amacala ukuba izakukhupha umyalelo obhaliweyo kwisindululo se-DNC sokuchitha ityala, nangona kungekho xesha libekiweyo elinikiweyo malunga nokuba eso sigqibo singanikezelwa nini. Ukuba ityala lesenzo seklasi liya phambili, oko kuya kubandakanya inkqubo yokufumanisa eya kuvula ukusebenza kwangaphakathi kweeDemocratic Primaries kwaye inyanzele amanani afana UWasserman Schultz ukungqina enkundleni ngezenzo kunye nezigqibo zabo ngexesha leDemocratic Primaries.
Iindaba zanamhlanje ezivela kwiPolitikiNJ.com
I-Anchor ye-Ex-CNN uSoledad O'Brien uthi iNethiwekhi yile 'Kutheni abantu bethiya iMedia'
Iingcebiso ezine zokuba amazwe ahlwempuzekileyo angayinyusa njani i-GDPs yazo
I-delta 8 vs i-delta 9
i-cast of united States vs i-billie yeholide
injani i-burt reynolds ngoku?
Iiriphabliki zeendaba ezikhululekileyo zeendaba
Zizidlo ezigqibotye eziluhlaza
Eyona mveliso yokuhluma kweenwele